जतिसुकै पुरानो मुसा किन नहोस्, केवल एकदिनमै यसको प्रयोगले हुनेछ गायब ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/जतिसुकै पुरानो मुसा किन नहोस्, केवल एकदिनमै यसको प्रयोगले हुनेछ गायब !
के हो मुसा ? शरीरमा मुसा ‘ह्युमन प्यापिलोमा’ भाइरसको संक्रमणले आउँछ । नवजात शिशुबाहेक प्रायस् सबै उमेरका मानिसमा यो रोग लाग्नसक्छ । भाइरसको संक्रमणपछि छालामा नदुख्ने खालको सानो ट्युमरजस्तो आउँछ । यो कसैमा कम हुन्छ भने कसैमा धेरै । धेरै या थोरै आउने दर मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा भर पर्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकामा मुसा बढी आउँछ । बलियो क्षमता भएकालाई एक–दुईवटा आएर आफैँ हराउन सक्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **